Jo Nesbø: iingcebiso ezili-10 ezivela kumbhali waseNorway osungulelwe ababhali | Uncwadi lwangoku
Jo Nesbø: Iingcebiso ezili-10 ezivela kumbhali waseNorway osungulelwe ababhali
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, Iincwadi, Inoveli, Inoveli emnyama
Ifoto kwi-K Magazine.
Umbhali waseNorway Jo Nesbø, inkosi yenoveli yolwaphulo-mthetho eNordic, inike kolu dliwanondlebe a uthotho lweengcebiso yababhali. Umdali womhloli UHarry hole kwaye kumnandi iincwadi zabantwana Bala eyakho iindawo, iindlela kunye nezizathu xa ebhala kwaye ubhala ngantoni. Iingcebiso ezili-10 eziqinisekileyo zokuba luncedo kubabhali bokuqala. Kwaye mhlawumbi abo kuthi sele benazo izinto abazenzayo babelane naye. Masibone.
1 1. Azikho iintsuku eziqhelekileyo zokusebenza
2 Bhala naphi na
3 3. Yiba nesicwangciso esifanelekileyo
4 4. Yomelela ngebali
5 5. Sebenzisa ubomi bakho
6 6. Bhala into onayo, onayo
7 7. Vumela isihloko sihambe sodwa
8 8. Owona msebenzi wobugcisa uziva ngathi awusebenzi.
9 9. Izimvo ezibekwa emgibeni
10 10. Zibhalele
1. Azikho iintsuku eziqhelekileyo zokusebenza
Apho iNesbø ibala khona ibenye imisebenzi eguqukayo ihlala ihluka kuxhomekeke kwindawo okhoyo. «Namhlanje ndivuke ngo-4 kusasa. Ndaya kwindawo engaphandle kwehotele, ndasela ikofu ndasebenza de kwaba li-8. Ndizakwenza udliwanondlebe kude kubethe u-4 PM, emva koko ndiye kwisikhululo seenqwelomoya ndibuyele eOslo. Ndizakusebenza kwinqwelomoya, mhlawumbi iiyure ezintlanu. Ukubhala yinto endiyenzayo xa ndingenazo ezinye izinto endizenzayo. Andinamithetho, kwaye ndivuka ngokuxhomekeke kwinto endiyenzileyo phezolo.
Bhala naphi na
«Ndibhala kuyo yonke indawo, kodwa ezona ndawo zilungileyo zezikhululo zeenqwelo moya kunye noololiwe. Xa uhleli kuloliwe okanye ulinde inqwelomoya, unexesha elincinci lokubhala. Oko kukwenza uzive ukuba ixesha lixabisekile kwaye kufuneka ulisebenzise. Ukuba uvuka kusasa kwaye uthi uza kubhala iiyure ezili-12, awuziva. Ndiyathanda ukwazi ukuba ndiza kwenza konke okusemandleni ngeyure enye okanye ezimbini kuphela. "
3. Yiba nesicwangciso esifanelekileyo
«Ukuba unebali elilungileyo onokuqala ngalo, liyakulunga nokuba ubhala njani.. Ndiyathanda ukuzithemba ukuba ndiyalazi ibali, ukuba xa ndiqala ukubhala, ndiye ndasebenza kaninzi kwakhona. Ke andinawo uvakalelo, emva kwephepha lokuqala, lokuba ndingumbalisi wamabali, umbalisi wamabali. Ibali sele likho, andiyenzi njengoko ndiqhubeka. Kulapho uziva ukhuselekile uxelela abafundi bakho, “Yizani nize, kuba ndineli bali limnandi. Ke khululeka kwaye undithembe. Le yindlela endiziva ngayo xa ndifunda imisebenzi yababhali abakhulu.
4. Yomelela ngebali
Abantu baseMelika zezona zihamba phambili ekuboniseni amabali abo. Kumaphepha ambalwa okuqala encwadi banendlela ecacileyo yokuzibaxa. Sisiko. UJohn irving iyenza, kwaye UFrank Miller, Umvelisi wenoveli umzobo unendlela efanayo yokukukhohlisa ukuguqula amaphepha. Ndiyakuthanda oko. Kwaye inokuba yiyo nantoni na eyenza ukuba abafundi bakho bafune ukuqhubeka nokufunda. Awunakucinga ngokwemigaqo. Sebenzisa nje loo mvakalelo unayo kwisibindi sakho. Ukuba umbono wesiqalo uyakonwabisa kwaye uvakala njengomceli mngeni, usendleleni elungileyo».
5. Sebenzisa ubomi bakho
«Kulungile ukuzoba amava obomi bokwenyani. Xa ndibhala incwadi efana Izihloko zentloko, Ndisebenzisa uhlobo olumnyama kodwa ndisebenzisa nemixholo ebomini bam. Ndenze izinto ezininzi ezahlukeneyo. Ndandiligosa kwimikhosi yomoya. Ndenza umculo. Ndisebenze njengomthengisi wempahla iminyaka emininzi. Le yindlela endifumana ngayo inkuthazo Izihloko zentloko. Xa ndandingumhlalutyi wezezimali, abo bazingeli beetalente bandenza udliwanondlebe nam. Into endincedayo kwiincwadi zam kukuba ndinobomi, ke, ndiyakwazi ukubalisa ngabanye.
6. Bhala into onayo, onayo
«Ayisiyo malunga nokuzama ukubhala incwadi ethengiswa kakhulu, kodwa malunga nokubhala oko unayo. Kwaye ukuba unethamsanqa, ungabelana ngokhetho lwakho ngokubalisa amabali kunye nabaphulaphuli abaninzi. Bendingayazi ukuba amabali am aya kufikelela kubafundi abaninzi kangaka. Bendicinga ukuba baninzi okwembalwa. Ndothuka ke ndakufumanisa ukuba ndinabantu abaninzi ekhaya.
7. Vumela isihloko sihambe sodwa
«Akukho mithetho xa kuziwa kwisihloko senoveli. Izimvo ziza ngeendlela ezahlukeneyo. Kunye Umntu weqhwa, inoveli yaqala ngesihloko. Ndacinga ukuba izwakala ilungile njengesihloko. Kwaye ke kwenzeka kum ukuba sithini isihloko ngokumalunga nebali. Eso yayisisiqalo. Ngamanye amaxesha, yinto yokugqibela endiyenzayo kwaye ngamanye amaxesha iza kum xa ndikwindawo embindini wencwadi. Njengoko benditshilo, akukho mithetho. Izihloko zentloko yayicacile ngenxa yentsingiselo ephindwe kabini. Kwafika kum ngokukhawuleza.
8. Owona msebenzi wobugcisa uziva ngathi awusebenzi.
«Umsebenzi wam wokubhala iincwadi yinto endinokuyenza simahla. Abanye bababhali ababalaseleyo hayi eNorway kuphela, kodwa kwihlabathi liphela, banokuba neminye imisebenzi ngaphandle kokubhala. Kodwa kuninzi, ukusebenza lelona candelo lililo xa besenza eyona nto bafuna ukuyenza.
9. Izimvo ezibekwa emgibeni
«Ndingathini xa ndebe ezinye iincwadi? Ngokuqinisekileyo. Kwaye ukuba ndilisela, ndingakuxelela ukuba ndiyaba kodwa andinakuxelela ukuba ngubani. Kulungile, a UMark Twain. UTom Sawyer kunye noHuckleberry Finn. Ezo yayiziincwadi ezintle kunye nabalinganiswa. Okwam ukubhala kuyindlela yokuphendula xa ndifunda. Ikwangumbono omnye onawo xa usetafileni kunye nabahlobo. Umntu uza kubalisa elinye ibali, omnye ke axelele elinye, emva koko alilandele. Ke kuya kufuneka uxelele into entsha nayo. Ndikhulele kwikhaya apho bendinamava amnandi kokubini njengomphulaphuli nanjengomfundi.. Ngoku lithuba lam ".
«Xa ndibhala, ndicinga ukuba ndifunda umfundi omnye, ngokwam. Okwam, ukubhala akuthethi ngokundwendwela abantu, kungokumema abantu ukuba uze phi. Kwaye oko kuthetha ukuba kuya kufuneka uyazi apho ikhoyo. Xa ufika kwiindlela ezinqamlezileyo, ukuba ucinga malunga nokuba umfundi angathanda ukuba uye phi, ulahlekile. Kufuneka uzibuze ukuba yintoni enokubangela ukuba ufune ukuvuka ngomso ugqibezele elo bali. Ngamanye amaxesha ibali liya kwalatha kwicala, kodwa ke, nguwe njengombhali ogqiba isigqibo. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha yincwadi ngokwayo enokuthi ikhokele, leyo ihlala yodwa.
Umthombo: I-foxy ebhadulayo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » Jo Nesbø: Iingcebiso ezili-10 ezivela kumbhali waseNorway osungulelwe ababhali
Iincwadi ezili-10 zothando ezilungileyo kwimbali ukukwenza uphinde uthandane
I-Biography ka-Octavio Paz